Wararka - CIAAR 2017 【Bandhiga Live】
Bishii Nofeembar 2017, 15 -kii Shanghai International Automotive Air Conditioning and Refrigeration Technology Exhibition (CIAAR 2017) ayaa lagu qabtay Shanghai Everbright Convention and Exhibition Center si guul leh. Iyada oo ah urur-sannadeedka warshadaha hawo-qaboojiyaha baabuurta, wax kasta oo ay tahay baaxadda bandhigga ama tirada iibsadayaasha, waxay gaareen heer sare oo taariikhi ah. Bandhiggu wuxuu leeyahay wadar ahaan 416 sumcad-horseedka warshadaha iyo shirkado wakiil gudaha iyo dibaddaba gudaha iyo dibaddaba saddex maalmood gudahood. Isla mar ahaantaana, bandhiggu wuxuu soo jiitaa Mareykanka, Kanada, Australia, Ruushka, Kuuriyada Koonfureed, Masar iyo 10619 booqdayaal xirfadlayaal ah oo ka kala socda 44 dal iyo gobol ayaa u yimid inay booqdaan oo iibsadaan. Bandhigyada oo ay ku jiraan saddex aag oo wax soo saar oo waaweyn: alaabta hawo qaboojiyaha baabuurta, qalabka qaboojiyaha guurguura iyo aaladaha gaadiidka qaboojiyaha.
Laga soo bilaabo 2010 ilaa 2017, shirkadeena waxay ka qeybgashay 7 bandhig oo Shanghai ah oo isku xigta, waxaan marqaati ka nahay horumarka degdegga ah ee hawo-qaboojinta baabuurta. Baabuurtu waa gaadiid muhiim u ah nolosha dadka. Marka la hagaajiyo heerka nololeed ee dadka, dad badan ayaa bilaaba inay iibsadaan baabuur. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka baaxadda leh ee baabuurta ayaa keenay dhibaatooyin taxane ah sida isticmaalka tamarta, yaraanta kheyraadka, iyo wasakhowga deegaanka. Dhibaatooyinkan ayaa ku kalifay shirkadaha waawayn ee baabuurta inay horumariyaan noocyada kala duwan ee baabuurta cusub ee aan lahayn wasakhaynta deegaanka. Si loo qanciyo baahiyaha jira, shirkadeena waxay u diyaarisay kombiyuutarrada korontada ee baabuurta tamarta cusub. Baabuurta tamarta cusub ee kombiyuutarrada korantada waxaa loo isticmaali karaa baabuurta korantada ee xawaaraha hoose iyo kuwa xawaaraha sare leh si loo daboolo baahiyaha isticmaaleyaasha kala duwan. Alaabtu waxay leeyihiin isku halayn sare. , Wax -ku -oolnimada sare, awoodda qaboojinta weyn, hawlgalka xasilloon, buuqa hooseeya, iwm, oo badbaadin kara tamarta illaa 20% marka la barbar dhigo badeecadaha la midka ah.
Saddexda maalmood, waxaa jira bandhigyo badan oo na soo booqda. Patent -ka roan -rooka ah ma aha oo kaliya mid soo jiitay indhaha dad badan oo baabuurta sameeya, laakiin sidoo kale dad badan oo ajaanib ah ayaa danaynayay. Bandhigga, waxaan ku barannay baahida suuqa, heerka horumarka ee isla warshadaha, iyo cilladahayaga. Waxaan si aad ah uga shaqayn doonnaa sidii aan u hagaajin lahayn nafteena mustaqbalka, u horumarin lahayn badeecooyin cusub oo badan si ay uga dhergaan shuruudaha suuqa, kuna dadaalaan sidii loo horumarin lahaa qaboojiyaha berrinka baabuurta.
Waqtiga boostada: Jun-10-2021